यी खानेकुरा जसले रोग प्रतिरोधात्मक(Immunity Power) क्षमता बढाउँछ - Janaki Post
यी खानेकुरा जसले रोग प्रतिरोधात्मक(Immunity Power) क्षमता बढाउँछ
तपाईं आफ्नो दैनिक खानामा दही (Curd) समावेश गर्नुहुन्छ ? लसुन नि ? यसमा पक्कै पनि तपाईंको जवाफ सकारात्मक आउनेछ। लसुन त हाम्रो खानाको अभिन्न हिस्सा नै भयो । तरकारीमा लसुन नभई हुन्न । त्यसैले त यो भान्सामा अनिवार्य हुनेगर्छ ।
तपाईंलाई हेक्का हुनुपर्छ, दही स्वादिलो मात्र होइन अत्यन्तै लाभदायक पनि हुन्छ। खासगरी पेटको लागि दही सेवन उपयोगी मानिन्छ। दहीमा भएको प्रोबायोटिक तत्वले खाना पचाउनमा मद्दत गर्छ । यसैगरी दहीमा प्रोटिन तथा क्याल्सियमसहित भिटामिन बी ६ (Vitamin B6) तथा बी १२ (Vitamin B12) हुन्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । दहीमा पोटासियम पनि पाइन्छ, जसले पाचनतन्त्रमा फाइदा गर्छ ।
सागसब्जी, दाल आदिमा लसुनको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ । लसुनमा एन्टी-व्याक्टेरियल तथा एन्टी-अक्सिडेन्ट तत्व पाइन्छ । औषधीय गुणले भरिपूर्ण लसुनको सेवनले रोगसित लड्ने क्षमताको विकास गर्नुका साथै रोगसँग लड्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
लसुनभन्दा कम उपयोगी छैन, बेसार पनि । सागसब्जीमा बेसार त नभई हुन्न । बेसारले सागसब्जीको रंग आकर्षक बनाउने मात्र होइन, स्वास्थ्यलाई समेत फाइदा गर्छ । बेसारको सेवनले विभिन्न किसिमको रोगको संक्रमण हुनबाट शरीरलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ । साथै, यसले विभिन्न रोग निको पार्ने हुँदा आयुर्वेदमा यसलाई औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । यसलाई औषधिको रुपमा दूध तथा पानीमा मिसाएर खाएमा यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ।
(Vitamin C) भिटामिन ‘सी’को राम्रो स्रोत हो, कागती (Lemon) । कागतीका साथै सुन्तला (Orange), अंगुर (Grapes )पनि भिटामिन ‘सी’ तथा एन्टीअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत हो। भिटामिन ‘सी’ ले सेतो रक्तकोषिका उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ, जसले संक्रमणसँग लड्न मद्दत गर्छ।
नेपालीहरूमाझ चिया लोकप्रिय छ। चियामा पनि कालो चिया तथा ग्रीन टी (Green Tea) धेरैको रोजाइमा पर्ने गर्छ । ग्रीन टी तथा कालो चियामा पर्याप्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट तत्व रहेको हुन्छ, जसको सेवनले रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्छ।
तरकारीको सूचीमा ब्रोकउलीलाई निकै स्वास्थ्यकर मानिन्छ । जसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक पोषणतत्वको प्रवाह गर्छ। यसमा फाइबर तथा एन्टिअक्सिडेन्ट तत्वका साथै भिटामिन ए, सी, तथा डी पाइन्छ । त्यसैले खानामा काँचो वा हल्का पाकेको ब्रोकाउलीलाई समावेश गरेर पनि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सकिन्छ ।
हरिया सागसब्जीहरूमा पनि पालुङ्गोलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । पालुङ्गोमा क्यारोटिन, एन्टिअक्सिडेन्ट तत्वका साथै भिटामिन सी पाइन्छ । पालुङ्गोले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने भिटामिन तथा पोषण तत्वको पूर्ति गर्छ ।
foods that increases the immune system
immunity power increasing food
Previous articleसप्तरीम लागुऔषध सहित एक जना पक्राउ
Next articleथप ३२३ जनामा कोरोना संक्रमित पुस्टि ! कति पुग्यो संख्या ?